ဆေးရုံ Cubicle ကုလားကာ
အများဆုံးအများပြည်သူနေရာများအတွက်အသုံးပြုအထည် (ဆေးရုံများ, သူနာပြုအိမ်တွေ, ကျောင်းတွေ, အသင်းတော်များ, ခန်းမ, ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်။ ) မီးလျှံနှောင့်နှေးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများလျှံနှောင့်နှေးအကြောင်းကိုကွဲပြားခြားနားသောစံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်။
ဗြိတိန်: BS 5867-2: ကုလားကာနှင့် drapes အဘို့အထည်များအတွက် Flammable စမ်းသပ်
တစ်ဦးကထည်နမူနာသတ္တုဘောင်ပေါ်မှာဒေါင်လိုက်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသတ္တုဘောင်နှစ်ခုတိုင်းတာခြင်းအမှတ်အသားများရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကမီးလျှံအဘို့အထည်မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 10 စက္ကန့်.
ရလဒ်များ: အဆိုပါထည်လျှင်ဤ FR စံဖြတ်သန်း:
2) သဖြင့်မီးလျှံသတ္တု frame ရဲ့အနားမှတဆင့်မီးမရှို့ပါဘူး။
အဆိုပါထည်သန့်ရှင်းရေးမီနှင့်အပြီးစမ်းသပ်ပြီး (ခြင်းဖြစ်သည် 12 သံသရာ 75 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ BS EN က ISO ၏ 10528 နျ Standard လျှော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ပြီးတော့လိုင်းအခြောက်) ။
တစ်ဦးကထည်နမူနာသတ္တုဘောင်ပေါ်မှာဒေါင်လိုက်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကမီးလျှံအဘို့အထည်မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 15 စက္ကန့်.
1) သဖြင့်မီးလျှံသတ္တု frame ရဲ့အနားမှတဆင့်မီးမရှို့ပါဘူး;
type ကို C (အမြင့်ဆုံးစံ):
အဆိုပါထည်မီနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ( 50 သံသရာ ထို့နောက် BS EN က ISO ၏ 10528 75 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာစံလျှော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အထို့နောက်နိမ့်အပူနှင့်အခြောက် tumble ။ )
တစ်ဦးကထည်နမူနာသတ္တုဘောင်ပေါ်မှာဒေါင်လိုက်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကမီးလျှံအဘို့အထည်မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်5စက္ကန့် 15 စက္ကန့်, 20 စက္ကန့်နဲ့ 30 စက္ကန့်.
1) သဖြင့်မီးလျှံများနှင့် afterglow ပြီးနောက် 2.5 စက္ကန့်ထက်မပိုဘူး,
2) သဖြင့်မီးလျှံသတ္တု frame ရဲ့အနားမှတဆင့်မီးမရှို့ပါဘူး;
LONGWAY Flame ဟာနှောင့်နှေးကာစရာကုလားကာထည်နှင့်အတူလိုက်နာ BS5867-2 အမျိုးအစားကို C လိုအပ်ချက်များကို။
ယူအက်စ်အေ: NFPA 701
NFPA (အမေရိကန်အမျိုးသားမီးသတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း) ကိုထည်မည်သို့အသုံးချမည်ကိုပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကိုစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါတယ်။ draperies, ကုလားကာနှင့်ဆင်တူဆွဲထားအထည်များကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သက်ဆိုင်သောစံနှုန်းဖြစ်ပြီး NFPA 701 : နျ Standard နည်းလမ်းများ•အထည်အလိပ်နှင့်ရုပ်ရှင်၏ Flame ဟာဝါဒဖြန့်ဘို့အမီးသတ်စမ်းသပ်မှု၏.
NFPA 701 စမ်းသပ်ခြင်း Method ကိုတစျခု (700gsm သို့မဟုတ် 21oz / စတုရန်းခြံထက်လျော့နည်းအထည်များအတွက်သင့်လျော်သော ): နမူနာ 45 စက္ကန့်မီးလျှံစတငျခဲ့သညျထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ NFPA 701 စမ်းသပ်ခြင်း Method ကိုတစ်ဦးကလွန်သွားစေရန်,
1) နမူနာများသဖြင့်ပျမ်းမျှအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု 40% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်
2) စမ်းသပ်အခန်းထဲသို့ကျကြကြောင်းနမူနာ၏အကြွင်းအကျန်များ .Fragments ထက်ပိုမို2စက္ကန့်ကိုမီးမရှို့ဖို့ကိုဆက်လက်မနေရကြ။
NFPA 701 စမ်းသပ်ခြင်း Method ကိုနှစ်ဦး (over700gsm သို့မဟုတ် 21oz / စတုရန်းခြံအထည်များအတွက်သင့်လျော်သော ): မီးလျှံနှစ်မိနစ်များအတွက်နမူနာ၏အောက်ခြေအစွန်းကိုအောက်တွင်လျှောက်ထားပြီးတော့ဆုတ်ခွာဖြစ်ပါတယ်။ NFPA 701 စမ်းသပ်ခြင်း Method ကိုနှစ်ဦးတို့ကိုရှောက်သွားစေရန်,
1) သည့်နမူနာစမ်းသပ်မှုမီးလျှံဟာနမူနာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ကနေ revmove ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ကျော်ကို2စက္ကန့်ဘို့အလျှံကိုဆက်လက်မပေးသင့်သည်,
2) မည်သည့်တစ်ခုတည်းသောအပြားနမူနာသည့် char အရှည် 435mm (ခုနှစ်တွင် 17.1) ထက်မကျော်လွန်သင့်သည်, ခေါက်နမူနာ 1050mm (ခုနှစ်တွင် 43.1) သည် ဖြစ်. ,
3) သည့်ဝေမျှဒါမှမဟုတ် floorof ရန်စမ်းသပ်မှုယန္တရားကျသွားနမူနာများ၏အကြွင်းအကျန်ကြမ်းပြင်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ကျော်ကို2စက္ကန့်ကိုမီးရှို့ဆက်လက်မပြုလုပ်သင့်။
ပျော်စေနှင့်ရေ Leaching လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ : တစ်ထုတ်လုပ်သူကခြောက်သွေ့တဲ့သန့်ရှင်းရေး (3 သံသရာ), ၎င်း၏ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကိုသက်ဆိုင်သောထိတွေ့မှုအခြေအနေများအကြောင်းမဲ့ထားပြီးအပြီးပစ္စည်းလည်းစမ်းသပ်ပြီးကြလိမ့်မည်ထည်သန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်ပဲရာသီဥတုပြီးနောက်၎င်း၏လျှံခုခံဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမလုပ်ပဲလိုက်တဲ့အခါ , ခဝါချမှု (5 သံသရာ) သို့မဟုတ်ရေတခြားထိတွေ့မှု (လုံးဝ 72 နာရီထက်လျော့နည်းမအခန်းအပူချိန်မှာကိုထိပုတ်ပါရေင်တစ်ဦးခွက်၌ဗတ္တိဇံကို) ။
ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများအထက်အပြင်တခြားစံချိန်စံညွှန်းများကွဲပြားခြားနားသော countries.In ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျရှိပါတယ်, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးလက်ခံစံချိန်စံညွှန်းများဟာ, ပြင်သစ်ဂျာမန်နှင့်ဗြိတိန်စံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးမီကလည်း ဥရောပ EN 13773 စံနှုန်း ကုလားကာဘို့ပိုပြီးဘုံဖြစ်လာနေသည်။
ဂျာမဏီ: Din 4102
ပြင်သစ်: NFP 92-503
Post ကိုအချိန်: Sep-17-2018
Adress: No.999 Xugongqiao လမ်း, Kunshan Huaqiao, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်။
E-mail ကို: enquiry@longway-tech.net
ဆေးရုံများ, သူနာပြုအိမ်တွေ, ကျောင်းတွေ, အသင်းတော်များ, Audi အပါအဝင်အများဆုံးအများပြည်သူနေရာများ (များတွင်အသုံးပြုပိတ်ထည် ...
ဆေးရုံ Cubicle ကုလားကာလျှံနှောင့်နှေး (ခေါ်မီးနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အဖြစ်တာရှည်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် ...
© Copyright - 2010-2018: ။ All Rights Reserved